သင်၏လူမှုမီဒီယာစျေးကွက်မြှင့်တင်ရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်အကျိုးအမြတ်ကိုမည်သို့တွက်ချက်မည်နည်း Martech Zone
စျေးကွက်သမားများနှင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာပလက်ဖောင်းများရင့်ကျက်လာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်တို့သည်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း၏ကောင်းကျိုးနှင့်ဆိုးကျိုးများကိုများစွာရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။ ငါဆိုရှယ်မီဒီယာအတိုင်ပင်ခံများ၏မျှော်လင့်ချက်များကိုမကြာခဏဝေဖန်လေ့ရှိသည်ကိုသင်မြင်လိမ့်မည် - သို့သော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်သည်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုအပြစ်ရှာသည်ဟုမဆိုလိုပါ။ ရွယ်တူချင်းများနှင့်ဥာဏ်ပညာကိုဝေမျှခြင်းနှင့်အွန်လိုင်းအမှတ်တံဆိပ်များနှင့်စကားပြောဆိုခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်အချိန်နှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုများစွာကိုချွေတာသည်။ ငါဆိုရှယ်မီဒီယာအတွက်ငါ့အချိန်ကုန်ဆုံးငါ့ကုမ္ပဏီ, ငါ့ထုတ်ဝေနှင့်ငါ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုငါသံသယရှိသည်။
အဆိုပါကိစ္စကိုသော်လည်းမျှော်လင့်ချက်များနှင့်တိုင်းတာခြင်းနှစ် ဦး စလုံး၏ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာတစ်ခုအနေနှင့်ဖောက်သည်တစ် ဦး သည်တွစ်တာမှတစ်ဆင့်တိုင်ကြားသည်။ ကုမ္ပဏီမှချက်ချင်းတုန့် ပြန်၍ ဖောက်သည်အတွက်ပြtheနာကိုမျှတစွာနှင့်အချိန်မီသေချာစွာပြင်ဆင်သည်။ ထိုဖောက်သည်၏ပရိသတ်သည်ထိုအပြုအမူကိုမြင်တွေ့ရပြီးကုမ္ပဏီအပေါ်အပြုသဘောဆောင်စွာစွဲမှတ်သွားသည်။ သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်ပြန်လာဘယ်လိုတိုင်းတာသလဲ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှသင်၏အမှတ်တံဆိပ်၏ခံစားချက်ကိုတိုင်းတာ။ ၀ င်ငွေနှင့်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိနိုင်သည်။ သို့သော်မလွယ်ကူပါ။
CMO များ၏ ၄၄ ရာခိုင်နှုန်းကဆိုရှယ်မီဒီယာများ၏စီးပွားရေးအပေါ်သူတို့၏သက်ရောက်မှုကိုတိုင်းတာနိုင်ခြင်းမရှိဟုဆိုကြသည်။ သို့သော်၎င်းသည်အမျိုးအစားအားလုံး၏ကုမ္ပဏီများအတွက်လုံးဝရရှိနိုင်သည်
မကြာခဏဆိုသလိုမဟုတ်ဘဲကုမ္ပဏီများသည်တိုင်းတာလိုကြသည် လူမှုမီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေရေး ROI ဒေါင်းလုပ်ချခြင်း၊ သရုပ်ပြခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း (သို့) Tweet (သို့) Facebook update ကိုတိုက်ရိုက်ရောင်းချခြင်းအားဖြင့်။ ၎င်းသည်လူမှုမီဒီယာ ROI ၏အနိမ့်ဆုံးဘုံပိုင်းခြေဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်အမြဲတမ်းယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်မဟုတ်။ သင်၏ထုတ်ကုန်သို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုကို ၀ ယ်ရန်အတွက်သင်၏အလားအလာသည်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်ရှိပါသလား။ စက်မှုလုပ်ငန်းအများစုတွင်သံသယဖြစ်ဖွယ်ရာများဖြစ်တတ်သည်။
တိုင်းတာနိုင်သောပန်းတိုင်များကိုသတ်မှတ်ပါ - ၎င်းသည်အသိပညာကိုတည်ဆောက်ခြင်းကဲ့သို့ရိုးရှင်းလွယ်ကူခြင်းသို့မဟုတ်ပိုမိုထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်း၊ အခွင့်အာဏာတည်ဆောက်ခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်း၊
လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုစီအတွက်တန်ဖိုးတစ်ခုသတ်မှတ်ပါ - ဤအရာသည်ခက်ခဲသောလုပ်ငန်းတာဝန်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်သင်၏ ၀ ယ်ယူသူများအားဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်ပညာပေးခြင်း၊ ပါ ၀ င်ခြင်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်း၏တန်ဖိုးကားအဘယ်နည်း။ သင်၏အလားအလာများနှင့်ဖောက်သည်များကိုအပိုင်းပိုင်းခွဲနိုင်သည်။ အွန်လိုင်းတွင်သင်နှင့်လိုက်ဖက်သူများကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်မလုပ်သောသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်း။ retention တိုးလာသလား။ တိုးမြှင့် upsell အခွင့်အလမ်းများ? ပိတ်ဖို့အချိန်ပိုမြန်လား စာချုပ်များ၏ပိုကြီးတဲ့အရွယ်အစား?
သင်၏ကြိုးပမ်းမှု၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုတွက်ချက်ပါ - ၀ န်ထမ်းများနှင့်စီမံခန့်ခွဲရေးမှမည်ကဲ့သို့ပေးရသနည်း။ ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုစီမံခန့်ခွဲရန်သင်ပလက်ဖောင်းများကိုမည်မျှသုံးစွဲမည်နည်း။ ဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာပြissuesနာများကိုပြန်အမ်းခြင်းသို့မဟုတ်လျှော့ချရာတွင်ငွေမည်မျှသုံးစွဲမည်နည်း။ သုတေသန၊ လေ့ကျင့်ရေး၊ ကွန်ဖရင့်စသည်တို့အတွက်ပိုက်ဆံတစ်ခုခုသုံးနေတာလား။ ယင်းတို့အားလုံးကို ROI တွက်ချက်မှုတွင်ထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်။
ROI ဆုံးဖြတ်ပါ - ((ဆိုရှယ်မီဒီယာသို့ ၀ င်ငွေစုစုပေါင်း ၀ င်ငွေ - စုစုပေါင်းလူမှုမီဒီယာကုန်ကျစရိတ်) x ၁၀၀) / စုစုပေါင်းလူမှုမီဒီယာကုန်ကျစရိတ်။
ဤတွင် MDG မှအချက်အလက်အပြည့်အစုံ၊ တိုင်းတာနိုင်သောရည်မှန်းချက်များကိုမည်သို့သတ်မှတ်မည်၊ လုပ်ငန်းတစ်ခုစီအတွက်တန်ဖိုးသတ်မှတ်ခြင်းနှင့်သင်၏ကြိုးပမ်းမှု၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုတွက်ချက်ခြင်းစသည်တို့ပါဝင်သည်။ လူမှုမီဒီယာ ROI ကိုတိုင်းတာရန်:
Tags: infographicMDGရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်ပြန်လာရွယ်လူမှုမီဒီယာအရေးယူမှုဆိုရှယ်မီဒီယာလှုပ်ရှားမှုဆိုရှယ်မီဒီယာကုန်ကျလူမှုမီဒီယာ infographicလူမှုမီဒီယာ roiဆိုရှယ်မီဒီယာတန်ဖိုး